Diplaomasia : Firenena efatra nanamafy fiaraha-miasa amin’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaDiplaomasia : Firenena efatra nanamafy fiaraha-miasa amin’i Madagasikara
Mitohy hatrany ny fanohanan’ireo firenena vahiny an’i Madagasikara. Porofon’izany, masoivoho vahiny efatra be izao no indray nanatitra ny taratasy manendry azy ireo tamin’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, omaly, teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha.
Araka izany, firenena efatra be izao ahitana an’i Egypte, Inde, Namibie ary Burkina Faso, izay soloin’ireo masoivoho voatendry hiasa eto amintsika ireo no nanamafy fiaraha-miasa amin’i Madagasikara.
Tonga nanatitra voalohany ny taratasy manendry azy tamin’ny Filohan’ny Repoblika ny masoivohon’i Egypte, Mohamed Ahmed Fouad Raslam. Narahin’ny masoivohon’i Inde, Subir Dutta, teo amin’ny faharoa. Teo koa ny masoivohon’i Namibie, Veiccoh Nghiwete ary farany ny masoivohon’i Burkina Faso, Ramatoa Sawadogo née Tapsoba Sulamata.
Saika nitovy avokoa ny nambaran’ireto masoivoho vaovao efatra ireto taorian’ny fanaterana ny taratasy manendry azy ireo. Nivoitra tamin’izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena misy azy tsirairay amin’i Madagasikara. Eo ihany koa ny fanohanana sy fanampiana amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, toa ny mahakasika ny angovo azo havaozina, ny fambolena, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny asa tanana, sns.
Ho an’ireo firenena afrikanina telo manokana, ho fanamafisana ireo fifanaraham-piaraha-miasa efa vita sonia tany aloha ary ny fanatanterahana izany no tena imasoana eo amin’izy ireo sy i Madagasikara.
Ho an’i Inde indray kosa, efa nisy ihany koa ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny roa tonta raha tsy hitanisa afa-tsy ny nahazoan’ireo mpiasam-panjakana malagasy miisa 350 fiofanana manokana. Teo ihany koa ny resaka ara-toekarena, toa ny fanomezam-bola 2,5 tapitrisa Dolara ho amin’ny fanamafisana ny ozinina mpanao zezika sy ny fikarakarana masomboly, sns.